ZIONA VAOVAO TANTARA par Lalaina Fatratra - Fichier PDF
ZIONA VAOVAO TANTARA .pdf
Nom original: ZIONA VAOVAO_ TANTARA.pdfAuteur: Lalaina Fatratra
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/07/2014 à 17:06, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2081 fois.
FITANDREMANA ANTRANOBIRIKY KRISTY FIORENANA
TENY FANOLORANA :
Tamin’ny Alahady 06 avrily 2014 teo no natao ny fanompoampivavahana fisantarana ny fankalazana an’Andriamanitra noho
ny tsingerintaona faha 60 n’ny Antoko Mpihira ZIONA VAOVAO,
1954 – 2014.
Teraka niaraka tamin’izany ny fikasana hanohy indray ny
famoahana ny Gazety VAOVAO ZIONA, efa navoakan’ny ZIONA
VAOVAO tany amin’ny taona ’90 tany ho any. Gazety kendrena
ho eny an-tanan’ireo rehetra efa nanolotra ny feony ho an’izany
antoko mpihira izany, nefa koa dia ho an’ny rehetra efa nandalo
tao amin’ny FJKM Antranobiriky Kristy Fiorenana, Fianarantsoa.
Natao izy hizaràna ny tenin’Andriamanitra nefa koa ireo vaovaon’ny fiangonana sy ireo
vaovaon’ ny mpianakavy eto Antranobiriky sy ireo rehetra miparitaka eran’ny vazan-tany efatra,
ary hanamafy orina izany fiainam-pianakaviana izany. Sehatra iray koa anefa ny VAOVAO
ZIONA hanentanana ny rehetra hifarimbona amin’ny eto an-toerana amin’izay ezaka
tanterahina. Mazava ho azy fa hisy ny tsangambato irin-kapetraka amin’izao faha 60 taonan’ny
ZIONA VAOVAO izao ary mbola hidirantsika lalina amin’ny manaraka.
Fa ity laharana ity aloha dia natokana hitaterana amintsika ny fiandohan’ny tantaran’ny Antoko
Mpihira ZIONA VAOVAO tany amin’ny voalohandohan’ny taona ’50 tany. Efa natao pirintyy
izany azy nozaraina ho an’ny mpianakavy tamin’ny Alahady 06 jolay teo. Araraotina koa anefa
ny hazakazaky ny teknôlôjia ka amoahana izany eto amin’ity pejin’ ny facebook izay
nosokafan’ny Gazety VAOVAO ZIONA. Inoana fa samy hanao ho zava-dehibe ny fampielezana
sy fampahafan-tarana ity pejy ity isika, ary indrindra handray anjara amin’ny fanafanàna azy.
Ary amin’izay rehetra atao, dia ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.
TANTARAN’ NY NIANDOHAN’NY ZIONA VAOVAO
aha nanamarika ny faha 90 taonany ny
fiangonana Antranobiriky tamin’ny volana
Novambra 1949, dia nisy foto-kevi-dehibe natsangana hobanjinina dia ny faha-100 taonan’ny
Fiangonana raha afaka 10 taona. Araka izany,
isaky ny nitsingerina io volana Novambra io, dia
nisy ny nantsoina hoe « Jobily kely », nanentanana
ny fiainam-panahin’ny mpiangona hibanjina
sahady ny faha-100 taona, ahatonga azy ireo ho
ziona vaovao, izany hoe ho kristiana manana
finoana vaovao, miorina eo amin’ny vatolampin’
Antra-nobiriky. Ny ankizy izany dia ho Sekoly
Alahady ziona vaovao, ny vehivavy ho Dorkasy
ziona vaovao, ny Lehilahy ho lehilahy ziona
vaovao. Teo amin’ny Jobily kely fahadimy,
Novambra 1954, no niforona ny Chorale, mazava
ho azy fa ny anarana nisalorany dia hoe
« CHORALE ZIONA VAOVAO »
y antony faharoa nampiorina ny ZIONA
VAOVAO dia ny nitsanganan’ny Chorale
tao amin’ny Ecole Rabaut Saint Etienne, Ivohidahy
(Randzavola ankehitriny) tamin’ny taona 1950 teo
ambany fitarihan’i Victor Andriamasy (11 febroary
1921 – 06 mey 1998) izay Talen’ny Kilasimandry
Zazalahy teny Amboniavaratra. Nifankahazo
tanteraka izy roalahy (James Andriamasinoro sy
Victor Andriamasy) ary nitovizany ny fifehezana
tanteraka ny mozika, ny famoronana sy ny fitendrena zava-maneno. Zazalahy avokoa ny mpihira
tao Ivohidahy ary karazan-kira maro (klasika, hira
tsotra) no nifantohany ; azo lazaina fa nanakoako
eran’i Madagasikara ny lazan’io Chorale io, ary
nampiaiky an’Antananarivo ny fampisehoana iray
nataony teny Antsahamanitra.
reo toe-javatra roa loha ireo no nanosika an’i
James Andriamasinoro hanangana koa Chorale
(izany no fiantso azy tamin’izany fa tsy antoko
mpihira) fa kosa eo anivon’ny fiangonana izay
notandremany. Olona mitsinjo lavitra izy
(visionnaire) ary efa tamin’izany no niorim-paka
tao aminy izany hoe « hiakatra an’Iarivo » ka
hanao ‘concert’ tsy eny ankalamanjana kosa anefa,
fa any am-piangonana. Ny hira efa misy, ny resaka
chorale efa nanomboka nahazo vahana, ny
fiangonana tandremany manana tanora rahateo,
koa niroso izy.
elo mirahavavy amin’ireo nanolotra ny feony
ho an’ny ZIONA VAOVAO tamin’ny namoronana azy tamin’ny taona 1954, dia Beby
Razanatonga, Alice Andrianarivony ary Charlotte
Rakotoarivelo no mahatsiaro ny 60 taona lasa ka
mizara izay tsaroany. « Nitety ny ray amandreninay 22 mianadahy eo amin’ny sary àry ny
Mpitandrina tany amin’ny voalohandohan’ny taona
1954, hoy izy mahatadidy, nizara ny fikasany
hanangana Chorale. Tamim-pifaliana no nandraisana ny soso-kevitra, eny fa na dia tsy mbola
azon’ireo ray aman-dreny an-tsaina mazava tsara
aza ny tian-kiaviana. Fantatra ho fiangonan’ny
mpiavy Antranobiriky tamin’izany, koa tsy
mahagaga raha zanak’Imerina ny ankamaroan’ ny
mpianakavin’ny finoana tao ary zanaka valovotaka. Efa nisy ny niasa taminay 22 mianadahy ireo
tamin’izany, hoy ny tohin’ny fitantarana, ny lahy
indrindra indrindra (mpiasan’ny banky, mpanjaitra, mpiasam-barotra …), fa ny maro an’isa dia
mbola mpianatra (sekoly Ambohitrantenaina,
Rabaut Saint Etienne, école européenne,
Mahazengy ….) 12 taona ny zandriny taminay
ireo raha efa nisy nananika na nihoatra ny 30 taona
ny sasany. »
amy mahatsiaro ny fianaran-kira tamin’ny
fotoan’andro izy telo mirahavavy ; voalohandohan’ny taona 1954 izany ary isaky ny Sabotsy
hariva ny fianarana sy famerenan-kira. Hafanampo moa izao ! Fifaliana sy firaisan-kina moa izao !
Tsy misy mahafantatra na mahay izany SolFa afatsy ny mpitarika, fa dia fampianarana ara-peo
fotsiny, manomboka amin’ny feo voalohany ka
hatramin’ny beso. Sarotiny i James Andriamasinoro teo tamin’ny fampianaran-kira ary miantefa
an-tsofiny avy hatrany raha vao misy feo iray
mivalana. Amin’ny ankapobeny dia tsy nananontsarotra ny fianaran-kira, ny ankabeazan’ny
« ankizy » ka zanaka olona mpihira na olona tia
hira. Tsy misy zava-maneno nampiasaina rehefa
mianatra, fa dia ahatsiarovana an’i James
Andriamasinoro, hoy ny mpitantara, ilay
« diapason » izay hakàny ny « clé ». Afa-tsy ny
« Haleloia » an’i F. Haendel, dia noforoniny
avokoa ny hira nohiraina tamin’izany. « Miverina
an-tsaina ny firahalahiana teo aminay 22
mianadahy , hoy ihany ny mpitantara. Malainkisaraka ny rehetra rehefa vita ny fampianarana,
koa dia mifanatitra avy eo no mihira eny andàlana. Ny lavitra indrindra naterina tamin’izany
dia izy mirahavavy nipetraka teny Tsianolondroa.
aha araha-mozika sy zava-maneno ary hira
mifampitohy fotsiny ny « antsam-panahy »
atao amin’izao fotoana izao, tamin’izany kosa dia
tena niainana ny « fahamasinana » (solennité et
spiritualité) ; Ny fanamian’ny ZIONA VAOVAO,
boléro mainty ambony ary akanjo fotsy lava, izay
mbola lovàn’ny Chorale mandraka ankehitriny, dia
mbola mitory izay fanajana ny masina izay .
« Concert spirituel » rahateo no fiantso azy
tamin’izany ary raha ny an’ny ZIONA VAOVAO,
tamin’iny taona 1954 iny, dia tena fanompoampivavahana an-kira mihitsy, manomboka amin’ny
fiantsoana ny anaran’ny Tompo, ny fanehoana ny
sitrapony, ny fiaiken-keloka, ny famelan-keloka,
ny fanekem-pinoana, ny toriteny etsetra etsetra
…... Nanafana fotoam-pivavahana tao Ikianjasoa
Rasalama indray andro ny ZIONA VAOVAO.
Pasitera Rakoto Andrianarijaona no voalahatra
hitoriteny ary ny ZIONA VAOVAO no nanao hira
« Ny foko, ry Jehovah » mialoha ny toriteny ho
fanomanam-panahy. Samy nifantoka tsara tamin’
ny hira ny mpiangona. Ary raha nitsangana
hitoriteny i Pasitera Rakoto Andrianarijaona
taorian’izay, dia hoy izy : « Ry hava-malala,
toriteny feno ilay hira teo, koa vavaka no hataoko
ho famaranana izany, dia hipetraka aho »
Y ANDRON’NY 28 NOVAMBRA 1954
VAOVAO ny « concert spirituel » voalohany tao
nitokanana azy . « Feno ny fiangonana, hoy ny
mpitantara mahatsiaro, ary fenofeno koa izahay
teny amin’ny alitara misantatra zava-baovao.
Pasitera Razaka Silasy no namaky ny rindran-teny
fanolorana ny hira tsirairay ary ny Mpitandrina,
James Andriamasinoro, no nibaiko anay 22
mianadahy. 18 ireo hira natolotra ka ny 14
tamin’ireo dia sangan’asan’ny Mpitarika avokoa.
Natao « a capella », izany hoe nohiraina tsy
narahin-java-maneno ny hira rehetra, na dia ny hira
kasika ‘ Haleloia’ an’i F. Haendel izay nohiraina
farany aza Tsy hay lazaina ny hafalianay 22
mianadahy taorian’ny « concert » fa ny voamarika
koa dia niteraka hafaliana anaty (fierté) teo
Andriamatoa Paul Rakotoarivony Mpitandrina tao
amin’ny fiangonana Amparibe Famonjena
Antananarivo no nantsoina hitoriteny ny
marainan’io 28 novambra io, ary ny hariva
tamin’ny 6 ora no natao ny fitokanana sy
nanaovana ny « Concert spirituel » voalohany.
erintaona taorian’izay, taona 1955, dia
niakatra an’Iarivo izahay, hoy ny mpitantara.
Camion no nandehanana ary akalana no nalahatra
ho solon-tseza, kanefa dia tsy nahatsapana
havizanana ny 400 kilometatra ». Ny fiangonana
Amparibe Famonjena, notandreman’ ny rain’i
James Andriamasinoro, no nanamarika Jobily
tamin’izany, ka nanasa ny ZIONA VAOVAO
hanao « concert ». Vao vita izany tamin’ny 7 na 8
alina tany ho any, dia nitodi-doha hamonjy an’ilay
« Vohitra faharoa » izahay satria nisy ireo tsy
maintsy namonjy ny asany ny Alatsinainy
ia izay raha atao indray mitopy ny
fiandohan’ny antoko mpihira ZIONA
VAOVAO tany amin’ny taona 50.
anefa ny fotoana, naparitaky ny asa sy ny
fanambadiana izy 22 mianadahy, maro no efa any
an-drovan’ny fanahy. Raha jerena ny lisitr’izy 22
mianadahy mpihira, dia ireo anarana misy ** no
fantatra fa mbola velon’aina. Naniry mafy izy ireo
ny ho avy amin’ity andro manan-tantara ity, kanefa
tsy afaka noho ny antony maro samihafa
ZIONA VAOVAO OMALY SY ANIO
 Tamin’izany 1954 izany dia nipetraka teo
Antananambony, tsy lavitra ny fiangonana
Antranobiriky, daholo ireo ZIONA VAOVAO
voalohany, afa-tsy roa no teny Tsianolondroa.
 Maro izy ireo no mpirai-tampo, zanaka
raiamandreny telo sy efatra teo amin’ny
Fiangonana. Rarivo Roger, Rarivo James
ary Ravololonarivo Mariette dia mpiraitampo. Mpirahavavy Andrianarivony Beby
sy Odette ; toy izany koa Raharimanana
Razafindramboa Alice sy Charlotte ; Ramiadandralambo Rabenja sy Rasoanandrasana
Myriame ; Ralimanana Charline sy Ralisoa
 Raha ny ZIONA VAOVAO, 60 taona aty
aoriana, indray no jerena, dia maro an’isa
ireo monina ivelan’Antananambony, lavitra
an’Antranobiriky ; misy aza ireo mipetraka
eny amin’ny farany avaratry ny tanàna, toa
an’Ankofafa, ary misy eny atsimon’ny
tanàna toa an’Ankidona sy Andalatery.
 Ny ZIONA VAOVAO voalohany dia nihira tsy
narahin-java-maneno (a capella), tsy
nampiasa Solfa, ny telo am-pahefan’ny hira
nataony dia hirany avokoa, ary ny
namorona ny ZIONA VAOVAO ihany no
nitarika ny hira (chef de chœur).
 Tamin’ny volana Desambra 1960 dia
tonga teto Antranobiriky ny « orgue électrostatique » marque « Synthèses Sonores » nohafarana
tany France ka 800.000 FMG no idiny tamin’izany.
Nanomboka teo dia nihira tsikelikely niaraka
tamin’ny orga ny ZIONA VAOVAO. Nahasarika ny
fiangonana rahavavay sasany teto an-toerana
izany ka nisy ny nanangana Chorale, nisy koa ny
Ny azo amaranana azy dia izao : Tena nanamarika
ny fiangonana kristiana taty antsimo, indrindra ny
teto Fianarantsoa, ny fiangonana Antranobiriky sy
ny Chorale ZIONA VAOVAO. Mpitarika mandrakariva izy tamin’ izany (lakolosy, fanasarahana
polipitra, Chorale, orga sns …) ary tokony
fahatraranyny faha-60 taonany izao.
IZY 22 MIANADAHY EO AMIN’NY SARY
Laharana voalohany : havia miankavanana
- Ralimanana Charline **
- Ramanantenasoa Florentine
- Razafindramboa Charlotte **
- James Andriamasinoro (mpitarika)
- Ravaoarinelina Bakoly
- Mbolamalala **
- Ralisoa Jeannette **
Laharana faharoa : havia miankavanana
- Rasoanaritsifa Caroline (Debo)
- Razafindramboa Alice **
- Raharimanana Charlie**
- Ramiadandralambo Rabenja
- Rasoanandrasana Myriame
- Andrianarivony Beby **
- Rasoamalala Charlotte **
Laharana fahatelo : havia miankavanana
- Harmine **
- Andrianarivony Odette
- Ravololonarivo Mariette **
- Rahelisoa Berthe
FEO FAHATELO Ankavanana miankavia
- Andrianasolo Daniel
- Rarivo Roger
- Rarivo James
FEO FAHEFATRA Ankavia miankavanana
- Razanamparany Herbert
- Razafiarison Jean-Chrysostome
Tononkalo novakina tao am-piangonana ny Alahady 06 avrilly 2014, andro nanokafana ny fankalazana
an’Andriamanitra noho ny faha-60 taonan’ny Chorale ZIONA VAOVAO (1954 – 2014)
Mbola kely izany izaho, nefa injao tsara hidy
ao an-tsisin’ny tadidy
Fiangonana iray, an’arabe miaka-drova
Ny anarany tsy miova
Any atsimotsimo any …….. (efa ela ange izany !..)
Dia teo an-tokontany
Izaho mihaino fianaran-kira ao am-piangonana ao
Fa ho teraka tsy ho ela ilay Ziona Vaovao…
Tena efa elabe izany : efatra amby dimampolo sy sivinjato sy arivo
Izaho mbola fito taona,
Nefa injao miraondraona
hatrany anatin’ny fanahiko ny Dera Laza
sy hira hafa koa, mihira fiderana sy salamo fihirana…
Dia nandalo ny taona, ny hatanorako manontolo
ry Ziona Vaovao,
Ka na nilaozana aza ilay Fianarantsoa… injao mbola ao am-po
Tsara hantsona, tsara faka ny haika nentinao, hamakiako ny fiainana…
Ka nijoro toy ny rova aho raha tojo ny manjo …
Dia tsy iray intsony aho fa roa
Fe ankehitriny, efa misy zanaka aman-jafy (ny sasany any an-dafy)
Nefa, ry Ziona, ny hiranao sy ny hafatra raketiny
Asa, ho’aho, fa tsy voafefin’
Ankehitriny àry, raha enimpolo taona ianao
Izaho ihany koa ety an-dàlam-pizorana ho amin’ny fahanterana
Ka injao tsy azo ferana
Ny vetsovetsom-po, fa lainga raha hisy ny fanadinoana
Ilay nanangana anao
Ny hiranao sy ny mpihiranao (ao anatin’ny tsiahy)
Indrindra ireo efa milanona any an-drovan’ny fanahy.
Ka izao no izy é !
Satriko ny hiantsa, satriko ny hiombona,
satriko ny hihaona, satriko ny hiverina …
Izahay anefa voatana aty anivon’Imerina
Ka ho fiarahabana anao, o, ry Zionan’ny Fanahy
Izao ny fanamby :
“Na ho saraka aza noho ny elanelan-tany,
“Ny fo ifampilaza ny hafany hatrany.
Sady hibanjina ny faravodilanitra aho, iny atsimon’Iarivo,
No hivetso am-po … tsy hitoloko fa hitraka loha :
“Ny fanaperan-tsoa, ry foko, ho azonao tokoa !”
Dia veloma indrindra re, ry vohitra faharoa ! ………
30 marsa 2014
ZIONA VAOVAO_ TANTARA.pdf (PDF, 551 Ko)
mbola fiangonana james rehetra izany mpihira voalohany andriamasinoro mianadahy taona antranobiriky chorale vaovao ziona tamin
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00254256.